Candy Crush အဆင့် 2229 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ - Candy Crush ဂိမ်း - အခမဲ့ဘဝပုံစံများသိကောင်းစရာများအရိပ်အမြွက်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် / အမျိုးအစား / Candy Crush အဆင့် 2229 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ ဇွန် 23, 2021 အားဖြင့် Isobella ဖရန့် Comment တစ်ခု ချန်ထားခဲ့ပါ။
Do you ever wonder howagame keeps you occupied all the time? Do you think it will go away from your mind anytime soon? ကောင်းပြီ, we can’t say much about other games but candy crush is not going away anytime soon. The craze for candy crush is increasing day by day. As they say candy crush fever is on the rise. The question remains do you want it to end? ငါတကယ်မယုံဘူး။. သင်သည် အဆင့်များကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ပြီးမြောက်ရန် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး အချိန်အကြာကြီး မပိတ်မိပါစေနှင့်. အကြံဥာဏ်များနှင့် လှည့်ကွက်အနည်းငယ်က ၎င်းကို အောင်မြင်အောင် ကူညီပေးနိုင်သည်။. ပေးလိုက်ရအောင် သကြားလုံး Crush အဆင့် 2229 လှည့်စားမှုများ သင့်အခက်အခဲကို သက်သာစေရန် အကြံပြုချက်များ.
ဤသကြားလုံးကြိတ်ခြင်းအဆင့်သည် အအေးခန်းစက်ရုံတွင် စတုတ္ထအဆင့်ဖြစ်သည်။ 122nd အချိန်သတ်မှတ်ထားသောအဆင့်. ဒီအဆင့်အတွက်, သင်ဂိုးသွင်းသေချာအောင်လုပ်ရမယ်။ 150,000 အတွက်အချက်များ 25 စက္ကန့်. ဒါအတွက်, သင်မှာ .... ရှိသည်4သကြားလုံးအရောင်များနှင့် 68 နေရာလွတ်များ. အမြင့်ဆုံးအထိ ရောက်နိုင်ပါတယ်။ 250,000 မှတ်. ဤအဆင့်ကို သကြားလုံးမြို့ဟု ခေါ်သည်။.
ဖမ်းခြင်းမှာ သကြားလုံးများကို အောက်ခြေသို့ရွေ့သွားစေရန် icing ကို ရှင်းထုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။. They can be used to defuse the candy bombs. The သကြားလုံး Crush အဆင့် 2229 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ mentioned below would beagood way for you to plan and strategize your way in this round.
This level requires you to score 150,000 အတွက်အချက်များ 25 စက္ကန့်. Your approach to overcome this level should be based on the following သကြားလုံးနှိပ်စက်မှုအဆင့် 2229 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ mentioned below:
ရောင်စုံဗုံးသကြားလုံးများကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်နိုင်လျှင် သို့မဟုတ် အောက်ခြေညာဘက်ထောင့်တွင်ရှိသော သကြားလုံးဗုံးများကို ဖြုတ်ပစ်နိုင်လျှင် သင့်စုစုပေါင်းတိုးလာနိုင်သည်။. သင်၏ရမှတ်သည် သကြားလုံးဗုံးဖြင့် သင်ဖယ်ရှားနိုင်သည့်သကြားလုံးအရေအတွက်ပေါ်တွင် အဓိကမူတည်ပါသည်။. များများသွားလေလေ စုစုပေါင်း တိုးတက်လာလေလေပါပဲ။.
ဤအဆင့်တွင် အစင်းများ သို့မဟုတ် ထုပ်ထားသော သကြားလုံးများကို အရောင်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။, ဗုံးက မင်းရဲ့ရမှတ်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်မရွေ့နိုင်တာကြောင့် အထောက်အကူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။. You should only think about combining them if you want to clear candy bombs or collect time candies.